Maxkamadda sare ee Maraykanka: "qofka dilka ku xukuman ma dooran karo sida loo dilayo" - BBC News Somali
Maxkamadda sare ee Maraykanka: "qofka dilka ku xukuman ma dooran karo sida loo dilayo"
Lahaanshaha sawirka MISSOURI DEPARTMENT OF CORRECTIONS
Image caption Russell Bucklew,
Maxkamdda sare ee dalka Maraykanka ayaa xukuntay in qofkii dil gaystay ee sugaya in la daldalo aanu xaq u lahayn in loo dilo "qaab aan xanuun badan lahayn".
Waxa ay sheegeen in qofka maxbuuska ah laga rabo caddayn ku qaaddan qaab kale oo lagu khaarajin karo "oo yaraynaya khatarta ka dhalan karta xanuunka ba'an". Hase ahaatee maxbuuskaas aanu sidaas samayn.
"Dib u eegistii sideedaad ee dastuurka Maraykanka ayaa mamnuucaysa qaababka khaarajinta ee naxariis darrada ah, balse taasi maxbuuska uma damaanad qaadayso geeri bilaa xanuun ah". Sidaas waxaa qoray garsoore Gorsuch, oo madaxweyne Trump uu magacaabay sanadkii 2017-kii.